EatFresh.org | JPMA, Inc
ဤချက်ပြုတ်နည်းများသည် EatFresh.org ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကောက်နှုတ်ချက်များဖြစ်သည်။ ဤချက်ပြုတ်နည်းများကိုသင့်အားမျှဝေခွင့်ပြုသည့်အတွက် EatFresh.org ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Eatfresh.org သည် Leah's Pantry နှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့နှင့်ကောင်တီ၏လူသားဝန်ဆောင်မှုများအေဂျင်စီ၏စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ လေအာ၏စားစရာခန်း EatFresh.org tool များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ကာလီဖိုးနီးယားတစ်လျှောက်လုံး tools တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်မိတ်ဖက်ထောက်ခံမှုပေးသည်။
EatFresh.org အပေါ်အင်္ဂါရပ်ပျေါလှငျဘို့မိမိတို့အမြန်သရုပ်ပြဗွီဒီယိုကို Watch
EatFresh.org သည်မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသော USDA အတည်ပြုထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CalFresh လူ ဦး ရေနှင့်၎င်းတို့အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသော, တန်ဖိုးနည်းချက်ပြုတ်နည်းများပါရှိသည်; အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလျှော့ချရန်စာရွက်စာတမ်းများ“ အစားအစာအစီအစဉ်များ”၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ၊ အစားအစာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသတင်းအချက်အလက်; နှင့် Dietitian မေးကြည့်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအင်္ဂလိပ်၊ စပိန်နှင့်တရုတ်ဘာသာဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ပိုကောင်းတဲ့နာတာရှည်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အတူလူနေမှုပုံစံစတဲ့ / အစားအစာရွေးချယ်မှုအကြား link ကိုနားလည်ရန်။
EatFresh.org လည်းလုံးဝအွန်လိုင်းကိုအပ်ကြောင်းအခမဲ့အာဟာရသင်တန်းသော EatFresh.org Mini ကိုသင်တန်းအမှတ်စဥ်, ပါဝင်သည်။ ဒါဟာ 15 အာဟာရနှင့်အစပြုသူကကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူနိမ့်စာတတ်မြောက်ရေးပရိတ်သတ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းကျန်းမာလူနေမှုအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုအင်္ဂလိပ်စာနှင့်စပိန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Chipotle အာလူး stuffing Poblanos
ဒီစာရွက်တစ်ပွဲလမ်းသဘင်မနက်စာ, ညစာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်မိသားစုစုဝေးဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ကြံပိုး-လိမ္မော်ရောင် glaze ချိုမြိန်အာလူး
တစ်အရသာ glaze နှင့်အတူလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာချိုမြိန်အာလူး
Cilantro ဒိန်ချဉ် Dip နှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက် Quesadillas
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် Tofu နှိုးဆော်-Fry
ဤသည်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား-ကြော်, ရောင်စုံအရသာနဲ့အာဟာရနှင့်အတူတင်ဖြစ်ပါတယ်။ Tofu ကယ်လစီယမ်နဲ့ဗီတာမင်အီး၏ကြီးမြတ်အရင်းအမြစ်သောအလွန်ကြီးစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာပရိုတိန်းဖြစ်ပါသည်
Black က Bean ကို Brownies
ဒီစာရွက်ကြီးမြတ်အရသာတစ်ခု creamy ကျန်းမာတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအောင်ထောပတ်သီးကိုအသုံးပြုသည်။
ညစ်ပတ်ပေရေဆန်နှင့် Blackeye Peas
Cajun မှုတ်သွင်းဆန်နှင့်ဝက်အူချောင်း cassarole
Black က Bean နှင့်ပြောင်းဖူး Pitas
ကလေးတွေကဒီပြန့်ပွားခစျြလိမျ့မညျ - ခုတ်ခြင်းနှင့်ရောစပ်, သူတို့ကိုတိုင်းအချို့ကိုပြုစေ!
ကတက် Switch နှင့်ဤကျန်းမာနံနက်ဂျုံယာဂုပါ!
Apple က Enchiladas
ဤသည်အပူပိုင်း-မှုတ်သွင်းပန်းကန်ညင်ညင်သာသာကြွယ်ဝအရသာများအတွက် spiced ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုစားခြင်းဗီတာမင် C နှင့်မန်းဂနိစ်၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြယ်ဓါတ်တိုးပေါ်မှာဤအချဉ်လှည့်ဖျားကြိုးစားပါ။
Black က-Eyed Peas နှင့်ရုံးပတီသီး
ဤသည်ညစာသင့်ရဲ့အစားအစာကိုတက်အကူးအပြောင်းနှင့်သင့်ချက်ပြုတ် repertoire ချဲ့ထွင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ငှက်ပျော Berry ဟာဖျော်ရည်
ပဲဟင်းပရိုတိန်းနှင့်ပဲမျိုးစုံထက်ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ အထိ3နေ့ရက်ကာလအဘို့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာစားကြွင်းစားကျန်ထားပါ။
အဘိဓါန် Moroccan မုန်လာဥသုပ်
ဒီအချိုမြိန်သုပ်ကျန်းမာသင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်သောဗီတာမင် A, နှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။
အစားပေါင်မုန့်သို့မဟုတ် crackers ၏သခွားသီးအသုံးပြုခြင်းသည်ဤမုန့်ညက်လန်းဆန်းနှင့်ပူနွေးလအတွင်းအဘို့ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။
အဆိုပါ "နှမသုံးယောက်" ပြောင်းဖူး, ပဲ, နှင့် (zucchini လိုမျိုး) squash ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကြီးထွားကူညီနေသောကြောင့် native အမေရိကန်တွေဥယျာဉ်တော်၌အတူတကွသူတို့ကိုစိုက်၏။ အဆိုပါ "နှမသုံးယောက်" လည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအာဟာရမုန့်ညက်ပေးဖို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Parmesan နှင့်အတူကုန်ကြမ်း Zucchini Ribbon
ခေါက်ဆွဲပေါ်မှာဤလှည့်ဖျားကြိုးစားပါနှင့်အစား zucchini ribbions ကိုအသုံးပြုပါ။